China Cationic ipholiyesta spandex mélange ijezi ilaphu abavelisi kunye nabathengisi | Huasheng
I-180g / m2
Le cationic ipholiyesta spandex mélange ijezi yelaphu, inqaku lethu lenombolo FTT-WB180, ilukiwe nge-9% spandex (elastane), 62% ipholiyesta kunye ne-19% ye-cationic.
I-cationic polyester spandex mélange ijezi yelaphu inithiweyo ngomxube weentsinga ezinqamlezileyo ukwenza umphumo wobushushu. Ilaphu lejezi le-mélange linemibala emininzi engwevu okanye ngwevu ngomnye umbala. Kukho imibala elandelayo ye-heather ekhoyo kwilaphu lethu lejezi le-mélange ngalo mzuzu.
Le cationic polyester spandex mélange ijezi yelaphu ilungile kwi-leggings, imilenze eshushu, iibhulukhwe ezimfutshane zemidlalo, iimpahla zangaphantsi, iibras zezemidlalo. Izakususa ukufuma kude nomzimba kwaye imelane nokufunxwa livumba. Eli laphu lejezi le-mélange liya kuhlala lomile kwaye lingenamphunga ngexesha lomsebenzi womntu onxibileyo. Kukhululeke kakhulu ukunxiba.
Ukuze kuhlangatyezwane nemigangatho engqongqo esemgangathweni yabathengi, ezi zingubo zejezi ze-mélange ziveliswa ngoomatshini bethu abaphezulu beesetyhula abaziswe eYurophu. Umatshini wokuluka ukwimeko entle uya kuqinisekisa ukunitha okufanelekileyo, ukuzolula okuhle, kunye nokucaca okucacileyo. Abasebenzi bethu abanamava baya kuzikhathalela ezi malaphu ejezi mélange ukusuka kwi-greige ukuya kwenye ukugqiba enye. Ukuveliswa kwawo onke amalaphu ejezi mélange kuyakulandela iinkqubo ezingqongqo ukwanelisa abathengi bethu abahlonitshwayo.
Egqithileyo UHeather Jersey udibanise ilaphu yokwaluka
Okulandelayo: I-Mélange ibrashi yelaphu